नेपालगञ्ज म्याराथनको उपधि एपिएफका पार्की र भण्डारीलाई : RajdhaniDaily.com
Home खेल नेपालगञ्ज म्याराथनको उपधि एपिएफका पार्की र भण्डारीलाई
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको ‘छैठौं नेपालगञ्ज म्याराथन’ का दुबै ईभेन्टमा सशस्त्र प्रहरीको विभागिय टिमले आफ्नो बर्चस्व कायम गरेको छ । शनिबार सम्पन्न भएको म्याराथन (पुरुष) तर्फ एपिएफका गोपीचन्द्र पार्की र हाफ म्याराथन (महिला) तर्फ एपिएफ कै पुष्पा भण्डारीले बाजी मारेका छन् ।
म्याराथनतर्फ सशस्त्र प्रहरी बलका पार्कीले ४२ दशमलव १९५ किलोमीटरको दुरी २ घण्टा १८ मिनेट ५९ सेकेन्डमा पार गरेर प्रथम स्थान हासिल गरी छैठौं नेपालगञ्ज म्याराथनको च्याम्पियन बनेका छन् । उनी १३ औं सागका स्वर्ण पदक विजेता पनि हुन् । उनले ७५ हजार रुपैयाँको पुरस्कार हात पारे । यो जित संगै पार्कीले टोकियो ओलम्पिकमा भाग लिन पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी, २ घण्टा २० मिनेट ४९ सेकेन्डमा सो दुरी पार गरेर त्रिभुवन आर्मी क्लबका कृष्णबहादुर बस्नेत द्वितीय बने उनले ३० हजार रुपैयाँको पुरस्कार हात पारे । आर्मी क्लब कै खगेन्द्र भाटले २ घण्टा २७ मिनेट २८ सेकेन्डमा सो दुरी पार गरी तृतीय भएका छन् । उनले २० हजार रुपैयाँको पुरस्कार प्राप्त गरे । गत वर्षका बिजेता नेपाल आर्मीका नवराज साउदले भने २ घण्टा ३१ मिनेट २१ सेकेन्डमा पार गर्दै चौथो भए । उनले १० हजारमा चित्त बुझाउनु पर्यो ।
हाफ म्याराथनतर्फ सशस्त्र प्रहरीकै पुष्पा भण्डारी च्याम्पियन बनेकी छन । उनले २१ किलोमिटरको दुरी १ घन्टा २६ मिनेट ५४ सेकेन्डमा पार गरी च्याम्पियन बनेकी हुन । उनी १३ औं सागमा सिल्भर मेडल विजेता पनि हुन । उनले ३० हजार राशीको पुरस्कार हात पारिन् । त्यसैगरी हुम्लाकी मन्जु रावतले १ घन्टा ३० मिनेट ७ सेकेन्डमा सो दुरी पार गरी द्वितीय र दाङकी शर्मिला घर्तीले १ घन्टा ३८ मिनेट १४ सेकेन्डमा सो दुरी पार गरी तृतीय भएका छ्न । उनीहरुले क्रमशः १५ हजार र १० हजार रुपैयाँको पुरस्कार प्राप्त गरे । सो प्रतियोगितामा प्रथमदेखि आठौ स्थान आउनेसम्मलाई पुरस्कारको व्यवस्था मिलाईएको थियो ।
विजेता खेलाडिलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा संघिय सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, संविधान सभा सदस्य तथा एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजिव शाह, नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणालगायतले पुरस्कार बितरण गर्नुभएको थियो । कोभिड–१९ का कारण दुईवटा ईभेन्टमात्र खेलाईएको आयोजक टिएस ठकुरीले जानकारी दिए ।
इस्लामाबाद । पाकिस्तानको दक्षिण भागमा पर्ने सिन्ध प्रान्तको सक्कुर जिल्लामा रेल र बस एक आपसमा ठोक्किँदा भएको दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या ३०...
Breaking News Kumar Raut - August 1, 2020 0
Breaking News Roshan Shrestha - February 19, 2021 0